Global Voices teny Malagasy » Ejipta: Sazy EFA-TAONA Am-ponja Ho Anà Bilaogera · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Jolay 2017 17:39 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Fahalalahàna miteny, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
Nanamarika ny Tantara i Kareem Nabil Sulaiman , Ejipsiana bilaogera, androany (22 Febroary 2007) noho izy Ejipsiana voalohany indrindra nahiditra am-ponja noho ireo lahatsoratra nosoratany tao amin'ny bilaoginy manokana .
Nomelohin'ny fitsaràna iray tao Alexandria ho naniratsira ny finoana Silamo sy ny filoha Ejipsiana, Hosni Mubarak , izy ary voasazy hifonja efa-taona miorina amin'ireo asasorany tao anaty Aterineto, araka ireo tatitry ny media .
Nanambara ity manaraka ity ny bilaogy iray natsangan'ireo mpanohana:
Mampahafantatra antsika i Dalia Ziada, mpikatroka mafana fo ho an'ny zon'olombelona sady bilaogera, fa voasazy hifonja EFA-TAONA i Kareem: telo taona noho ny fanamavoana fivavahana, ary ny taona iray noho ny fanalàna baraka ny filoha.
Hatombok'ireo mpisolovavany amin'ny Sabotsy (24 Febroary 2007) ny fampiakarany fitsaràna ambony, saingy voalaza taminay fa tsy dia hisy vokany izany. Antenaina fa hanena ny sazy izany.
Vaovao ratsy ho antsika rehetra izany, ary tianay ho fantatrareo rehetra fotsiny fa hitohy ity ady ho an'ny fahafahana ity mandra-pamoaka azy.
Efa nandrakotra io fahorian'i Sulaiman io ny Global Voices eto , eto  sy eto .
Ahitàna ireto manaraka ireto ireo fiampangàna an'i Sulaiman, izay any am-ponja nanomboka tamin'ny voalohandohan'ny Novambra (2006) miandry ny fitsaràna: fampirisihana ny olona hankahala ny finoana Silamo, fanaparitahana tsaho ratsy izay manakorontana ny filaminam-bahoaka sy manala baraka ny Filoha Ejipsiana.
Tsy nahita ambara i Esra'a, namana bilaogera sady Bahraini mpikatroka mafana fo, rehefa naheno ny nanjo ny namany .
“Voasazy hifonja efa-taona ny namako Kareem. Ny telo taona amin'ny saziny dia noho ny fijoroany manohitra ny finoana Silamo ary ny iray hafa kosa dia noho ny ‘fanalàna baraka ny Filoha’.
Tsy misy zavatra hafa ambarako intsony. Tsy haiko raha tokony hitomany aho na handaka zavatra noho ny hatezerana….Tsy mendrika izao mihitsy izy,” hoy ny nosoratany tanatin'ny fahoriana.
Aza miala… mbola ho avy ireo fanehoankevitra hafa…
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/28/104293/
 bilaoginy manokana: http://karam903.blogspot.com/
 Hosni Mubarak: http://www.answers.com/President%20Hosni%20Mubarak
 naheno ny nanjo ny namany: http://www.mideastyouth.com/2007/02/22/the-day-they-took-away-our-friend/